You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Muporofita: Nhengo yangu inokuponesa
By Muchaneta Chimuka on	 January 12, 2018 · NHAU DZEKUMATARE
Muporofita wechechi yeJohanne Masowe weChishanu Nyenyedzi Nomwe akamiswa mudare reHarare Magistrates’ Courts achipomerwa mhosva yekubata chibharo mudzimai waainamatira pakirawa yake iri kuBudiriro 4, muHarare. Dare rakaudzwa kuti muporofita uyu, Herbert Senda (34), akataurira mudzimai uyu kuti matambudziko ake anokwanisa kugadziriswa kuburikidza nesikarudzi.
Mutongi wedare iri, Rumbidzai Mugwagwa, akati Senda adzoke kudare mushure mekumupa bhero re$50. Muchuchisi Sebastian Mutizirwa anoti mudzimai uyu, uyo ane makore 26 ekuberekwa, akashanyira sowe raSenda achida kubatsirwa pamatambudziko ake mumwedzi waNyamavhuvhu gore rapera munguva dzamasikati.
Senda anonzi akanamatira mudzimai uyu mushure mezvo ndokutanga kumubata-bata muviri. Mudzimai uyu anonzi akabva asairira muporofita uyu kure asi iye akashandisa chisimba ndokumukumura hembe dzake. Mudzimai uyu anonzi akabvunza Senda kuti sei aimubvisa hembe, muporofita ndokumupindura achiti matambudziko ake aikwanisa kugadziriswa bedzi nenhengo yake yesikarudzi.
Mukadzi uyu akaedza kuchema asi muporofita uyu ndokumutyisidzira nerufu ndokunge akati bufu zvechibharo ichi kuvanhu. Muzuva rakatevera munguva dzemanheru, Senda anonzi akakumbira ruregerero kumumhan’ari uyo anga ava kukagara pasowe rake. Mudzimai uyu akamupindura achiti aizonoudza amai vake nezvechibharo ichi apo Senda anonzi akamutyisidzira nerufu zvakare.
Senda anonzi akazotangisa kunamatira mumhan’ari uyu ndokumubata chibharo zvakare.